smartMILE & Ụlọ ọrụ • Kọwaa. Chọta. Tinyegharịa.
Ngwa, ọrụ na akụrụngwa ndị ọkachamara kwadoro ụlọ ọrụ
Nyochaa ngwa ngwa niile ⟶
Ọrụ ndị ahịa & CRM, njikwa mmekọrịta ndị ahịa (CRM)
Kacha mma maka
Ụlọ ọrụ etiti nha
Nnukwu ụlọ ọrụ
Lelee ọnụahịa na pipedrive.com ↗
Imekọ ihe ọnụ, njikwa oru ngo
Lelee ọnụahịa na monday.com ↗
Nkwukọrịta, Social Media Management
Lelee ọnụahịa na crowdfireapp.com ↗
Nkwukọrịta, Ndezi vidiyo
Lelee ọnụahịa na promo.com ↗
IT & Nchekwa, Njikwa Okwuntughe
Lelee ọnụahịa na 1password.com ↗
Nyochaa. Chọta. Tinyegharịa.
Nyochaa ngwanrọ maka mkpa azụmahịa ọ bụla
Ọrụ ndị ahịa & CRM
A sị na m jụrụ ndị mmadụ ihe ha chọrọ, ha gaara ekwu ịnyịnya na-agba ọsọ.
Nrụpụta ihe abụghị ihe mberede. Ọ bụ mgbe niile site na ntinye aka na ịdị mma, atụmatụ ọgụgụ isi, na mbọ gbadoro anya.
Ọ bụrụ na ị na-etinye oge buru ibu na-eche banyere ihe, ị gaghị eme ya.
Ọ bụghị ịma ihe ị ga-eme, ọ na-eme ihe ị maara.
A na-enwetakarị ihe ịga nke ọma site n'aka ndị na-amaghị na ọdịda bụ ihe a na-apụghị izere ezere.
Mfe na-agbada ruo nzọụkwụ abụọ: chọpụta ihe dị mkpa, kpochapụ ndị ọzọ.
Ị nwere ike ime ihe ọ bụla, ma ọ bụghị ihe niile.
Tozọ ị ga - esi bido ịkwụsị ikwu okwu wee bido ime.
Ezi ọnụ ahịa nke ihe ọ bụla ị na-eme bụ oge ị gbanwere maka ya.
Isi ihe abụghị ibute ihe dị n'usoro ihe omume gị ụzọ, kama ịhazi ihe ndị ị ga-ebute ụzọ.
Ebumnobi m abụghịzi imekwu ihe, kama ka m nwee obere ihe m ga-eme.
Ezi iguzosi ike n'ezi ihe bụ ime ihe ziri ezi, ebe ịmara na ọ dịghị onye ga-ama ma i mere ya ma ọ bụ na i meghị.
Chọpụta ngwa ngwa ndị ewu ewu
OBI ỤTỌ MONDAY :)
Professional freelancer ọrụ n'aka gị
Nke kacha mma maka mmefu ego ọ bụla
Chọta ọrụ dị elu na ọnụ ahịa ọ bụla. Enweghị ọnụego elekere kwa elekere, naanị ọnụahịa dabere na ọrụ.
Ọrụ dị mma mere ngwa ngwa
Chọta nke ọma freelancer ịmalite ịrụ ọrụ gị n'ime nkeji nkeji.
Ịkwụ ụgwọ echedoro, oge ọ bụla
Mara mgbe niile ihe ị ga-akwụ n'ihu. Agaghị ahapụ ụgwọ gị ruo mgbe ị kwadoro ọrụ ahụ.
24 / 7 ụgbọelu
Ajụjụ? Nweta nkwado oge niile iji nyere aka n'oge ọ bụla, ebe ọ bụla.
GOOGLE CHROME dị jụụ
Nyochaa Ngwa & Ọrụ
Sọftụwia & Ọrụ
Nwere ike 16, 2022
Nwere ike 15, 2022
Onye Chris Duckett dere, onye nchịkọta akụkọ APAC Chris Duckett APAC Editor Chris malitere njem akụkọ ya na 2006 dị ka onye nchịkọta akụkọ nke Builder AU mgbe ọ banyechara na CBS dị ka onye mmemme. Mgbe ọ gachara ndị Canada, ọ laghachiri na 2011 dị ka onye nchịkọta akụkọ TechRepublic Australia, ma bụrụ onye Australia ugbu a ...
Eletrọnịkị: Nlebanya nke ụlọ nyocha
Ekpughere Intel 'Alder Lake HX': New 12th Gen CPUs Fire Up Mobile Worksts
Intel taa weghaara ákwà mgbochi ahụ n'elu ikpo okwu nhazi nke 12th Generation "HX", ọkwa kachasị ike nke silicon "Alder Lake" maka laptọọpụ. Ewubere HX maka ojiji na ebe a na-arụ ọrụ mkpanaka yana kọmpụta egwuregwu kacha elu. A ga-edobe ibe HX n'elu ọkwa 12th Gen H na-anụ ọkụ n'obi na ...
Aka Na: Lenovo's 2022 Legion 7 & 7 Slim Gamers Rev Up the Ryzen na Core Chips
Lenovo taa kwuputara mgbakwunye 16-inch ọhụrụ na ahịrị laptọọpụ egwuregwu ya, Legion 7 Slim (na 7i Slim, na-egosi Intel CPU), yana Legion 7 enwetara ume ọhụrụ (na Legion 7i). Igwe ndị a na-arapara n'ụdị Legion-laptop anyị hụrụ n'ime afọ ole na ole gara aga, ...
OLED & 'Alder Lake': 2022 Asus Zenbook Pros Pack Power, Ngosipụta dị egwu (Mgbe ụfọdụ, Abụọ)
Asus na-aga n'ihu itinye ego ya na kọmpụta ihuenyo abụọ na teknụzụ ngosi OLED, na-ekwupụta ụdị abụọ nwere OLED, Zenbook Pro 14 Duo OLED na Zenbook Pro 16X OLED. Ọ bụ ezie na ndị a, n'ezie, na-ekekọrịta teknụzụ ihuenyo OLED, ha dị iche n'ụdị na ebumnuche. Anyị nwere ike...
Ntuziaka Grad 2022: Laptọọpụ kacha mma maka ụdị onye gụsịrị akwụkwọ
Ndị ọkachamara anyị anwalela ngwaahịa 130 na ngalaba Laptọọpụ n'afọ gara aga kemgbe 1982, PCMag anwalela ma tụọ ọtụtụ puku ngwaahịa iji nyere gị aka ịme mkpebi ịzụrụ nke ọma. (Lee ka anyị si nwalee.) Ọ bụrụ na ị dịla njikere ịzụ ahịa okpu gị na uwe mwụda gị maka azụmahịa-oge (ma ọ bụ sweatpants na ...
Nwere ike 6, 2022
AMD wetara Zen 3 CPU Architecture na Chromebook na Ryzen 5000 C-Series
AMD na-emeghe ụzọ maka akwụkwọ Chrome dị ike karị site n'iweta ihe owuwu Zen 3 ya na laptọọpụ Google kwadoro. Nsonaazụ bụ ibe Ryzen 5000 C-Series, nke ga-amalite ịbata na Chromebooks nke ewepụtara ịmalite na June na Julaị. Ihe mgbawa kachasị ike n'ime ezinụlọ bụ ...
MSI Vector GP66 Nyocha | PCMag
A ga-etinye ya n'oge na-adịghị anya, mana na nke a na-edepụta laptọọpụ egwuregwu kachasị ọsọ na nchekwa data benchmark anyị-na-ejide akara PCMark 10 kachasị elu na ọnụ ọgụgụ etiti n'ime abụọ n'ime ule egwuregwu atọ nke ụwa - abụghị Alienware ma ọ bụ Razer na anaghị efu $3,000 ma ọ bụ karịa. Ọ bụ MSI ...
Ihe ngosi 'Mobile Phone Museum' na-ebido na ekwentị dị egwu
Ahụla m ụfọdụ ekwentị ọhịa n'ụbọchị m. Ekwentị lipstick. Ekwentị etemeete. Ekwentị ndị dị ka Shrek. Ugbu a ekwentị niile dị egwu nke akụkọ ihe mere eme na-agbakọ ọnụ na ihe ngosi ngosi ekwentị dị ịtụnanya, ihe ngosi mebere nke otu onye nyocha Ben Wood na-edu, nke na-egosi ihe karịrị ekwentị 2,000…
A na-agụkwa ụbọchị atụmatụ ekwentị mkpanaaka $10?
Otu n'ime ihe kachasị mma gbasara ụlọ ọrụ mkpanaka na US bụ plethora nke ndị na-arụ ọrụ mebere dị ọnụ ala. Companieslọ ọrụ dị ka Tello, Ting na US Mobile (ha niile gosipụtara na akụkọ anyị na atụmatụ ekwentị dị ọnụ ala kacha mma) na-ebuga atụmatụ okwu na ederede maka ihe na-erughị $ 10, yana atụmatụ data maka ọ bụghị…
Ekwentị kacha mma maka ndị agadi na 2022
Onye ọ bụla kwesịrị ijikọ. Ndị agadi, ndị nwere ike ịnọpụrụ iche na ezinụlọ ha ma ọ bụ nwee mkpa ahụike akọwapụtara, ekwesịghị ịhapụ ya. Ụlọ ọrụ smartphone, n'ozuzu ya, anaghị eche maka mkpa dị mkpa nke ahịa ndị agadi, ma ọ bụrụ na ị ṅaa ntị, ị nwere ike ịhụ ndị na-ebu na ekwentị ...
AirTag vs. Tile: Kedu ihe nchọta Bluetooth ka ị ga-ahọrọ?
Ọ bụrụ na ị na-azụ ahịa maka ihe egwu Bluetooth n'oge ezumike a, ị nwere ike ịhọrọ n'etiti AirTag na Tile. O doro anya na Apple jiri AirTag gbasaa ụdị a, mana Tile (nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka sọftụwia ezinụlọ Life360 nwetara) abanyela na egwuregwu ahụ ogologo oge ma nwee…
Sinope TH1123WF Smart Wi-Fi Thermostat Nyocha
Anyị enyochala ọtụtụ igwe ọkụ ọkụ dị ala maka sistemu kpo oku gas na mmanụ, mana Sinope TH1123WF ($114.95) bụ akara ọkụ ọkụ smart ọkụ eletrik naanị maka sistemu ọkụ eletrik. Ọ na-ahapụ gị iji ekwentị gị jikwaa kpo oku ụlọ gị, ma ọ bụ jiri olu gị site na Alexa, Google Assistant, ma ọ bụ olu Siri...
Oghere Robot kacha mma maka ntutu ntutu
Anyị niile hụrụ anụ ụlọ anyị n'anya, mana ịwụfu nwere ike bụrụ nnukwu ihe mgbu. Ọ bụrụ na ị nwere pusi ma ọ bụ nkịta na-ahapụ ajị anụ n'ụlọ niile, ị nwere ike ịchọrọ itinye ego na oghere robot nke nwere ike wepụ ụfọdụ ọrụ nhicha na efere gị. Enweghị ụkọ ụdịdị...
Robot mops kacha mma maka 2022
Ọ dịghị onye na-amasị ịcha ahịhịa. Site na bọket juputara na mmiri ruru unyi, ruo na eriri mop na-adịghị ọcha (na nnukwu), ọ bụ ọrụ na-arụsi ọrụ ike nke na-achọ nkwalite dị ukwuu. Obi dị m ụtọ na mops robot nọ ebe a iji mee ka ndụ gị dịkwuo mfe. Ihe niile ị ga - eme bụ mejupụta tank, pịa mmalite, ...
Ọnụ ụzọ vidiyo kacha mma maka 2022
Otu ụzọ dị mfe iji chebe gị pụọ ​​na ohi ihe onwunwe, mbuso agha ụlọ, ndị ohi na-apụnara mmadụ ihe, na ọbụna ndị ọka iwu na-achọghị bụ ịchọpụta onye nọ n'ọnụ ụzọ gị tupu imeghe ụzọ. Tinye mgbịrịgba vidiyo, usoro nchebe mbụ maka ndị nwe ụlọ na-abụghị naanị na-ahapụ gị ka ị hụ ma soro gị kparịta ụka ...
Akaụntụ & Ego
Ngwanrọ ndebe akwụkwọ obere azụmaahịa
Akụrụngwa Akaụntụ maka ndị were onwe ha
Ngwanrọ aza ajụjụ efu
Njikwa Omume Akaụntụ (13)
Mmefu ego na nsochi (122)
Ngwa mmefu ego efu
Akụkọ gbasara ego (167)
Nchọpụta aghụghọ (55)
Njikwa onyinye (11)
Njikwa itinye ego (40)
Njikwa mbinye ego (23)
Ịkwụ ụgwọ na akwụkwọ ọnụahịa (318)
Ngwanrọ akwụkwọ ọnụahịa efu
Akụrụngwa akwụkwọ ọnụahịa maka ndị ọrụ nkwekọrịta & Freelancers
Ngwanrọ akwụkwọ ọnụahịa maka obere azụmaahịa
Ịzụta na mmefu (96)
Ngwanrọ mkpesa efu efu
Njikwa ihe egwu (91)
Azụmahịa & FX (17)
Njikwa ụtụ isi (43)
Nchịkọta & ọgụgụ isi
Nnwale A/B (67)
Ngwanrọ nyocha HR
Ọgụgụ isi Artificial (AI) (373)
Nnukwu data (239)
ọgụgụ isi azụmahịa (BI) (408)
Ngwa ahịa ọgụgụ isi azụmaahịa azụmaahịa
Mwepụta data (48)
Ngwuputa data (81)
Nleta data (144)
Nchịkọta shelf dijitalụ (8)
Data ebumnuche (6)
Nyocha mkpanaka (61)
Nchịkọta amụma (177)
Mpempe akwụkwọ mkpesa (289)
Ndekọ oge (26)
Nyocha ndekọ ọnụ ọgụgụ (15)
Ọchụchọ Anya (9)
Nchịkọta Weebụ (116)
Njikwa bọọdụ (20)
Nlereanya azụmaahịa (25)
Kalenda na nhazi oge (152)
Ịhazi ngwanro maka ụlọ oriri na ọṅụṅụ
Ịhazi ngwanrọ maka obere azụmaahịa
Ịhazi ngwanrọ maka iwu ụlọ
Ngwanrọ nhazi oge n'efu
Nchekwa igwe ojii (109)
Njikwa Akụrụngwa Dijitalụ (104)
Ọgbọ akwụkwọ (35)
Njikwa akwụkwọ (226)
Ngwanrọ njikwa akwụkwọ iwu
Nyefee na ikekọrịta faịlụ (101)
Njikwa echiche (76)
Ozi ngwa ngwa na nkata (126)
Njikwa Ọmụma (110)
Nkọwapụta uche (11)
Ngosipụta n'ịntanetị (14)
Mmekọrịta oru ngo (286)
Mpempe akwụkwọ (15)
Onye na-akpọ oku akpaaka (26)
Njikwa Center oku (70)
Ngwa Center oku maka obere azụmaahịa
Ndepụta oku (14)
Njikọ ndị ọrụ (14)
Ọrụ faksị (7)
Nkwukọrịta nke ime (176)
Ngwanrọ nzikọrịta ozi ime ụlọ obere azụmaahịa
Ihe ngosi (50)
Nkwukọrịta dị n'otu (88)
Mgbakọ vidiyo (91)
Ngwanrọ nzụkọ vidiyo efu
Ngwa ngwa VoIP efu
Usoro nhazi oge (99)
Njikwa Ụlọ Ọrụ kọntaktị (86)
CRM dị fechaa
Otu onye ọrụ CRM
CRM zuru oke
CRM maka obere azụmahịa
CRM maka Real Estate
Ngwanrọ CRM maka ọrịre
Ngwanrọ CRM mepere emepe
CRM Ewuru maka GSuite
Mkparịta ụka ndị ahịa (163)
Ngwa nkata Live n'efu
Platform data ndị ahịa (37)
Mmekọrịta ndị ahịa (326)
Ngwanrọ ihe ịga nke ọma ndị ahịa
Ahụmahụ ndị ahịa (261)
Ọrụ ndị ahịa (237)
Ngwanrọ ọrụ ndị ahịa maka obere azụmaahịa
Njikwa nzaghachi (141)
Ikwesị ntụkwasị obi & Ndị otu (85)
Ngwa ndị otu maka ndị otu
Nbinye ego CRM (12)
Nkwado ime anya (46)
Ndokwa na ntinye akwụkwọ n'ịntanetị (108)
Ụlọ ọrụ nkwado na enyemaka (162)
Nnyocha na ntuli aka (114)
Ngwa nyocha efu
Ị nweta tiketi na oche enyemaka (87)
Njikwa ndị ọbịa (49)
Nhazi & mgbasa ozi
Mbipụta 3D (9)
Mmepụta na njikwa ọdịnaya (97)
Eserese eserese (118)
Ngwa nka eserese efu
Ndezi onyonyo (66)
Ngwa ndezi onyonyo efu
Ozi / Chart (30)
Sistemụ ọba akwụkwọ (18)
Akara akara (30)
Ngwa imewe Logo efu
faịlụ mgbasa ozi (26)
Ndezi vidiyo & 3D (75)
Ndezi vidiyo efu na ngwa 3D
Eziokwu mepere emepe (12)
Mmụta na Mmụta
Ngwa odee (57)
Sistemụ njikwa mmụta (LMS) (217)
Ngwanrọ Ọzụzụ ụlọọrụ
Ụlọ ahịa ndekọ mmụta (LRS) (13)
Mụta maka koodu (14)
Nlekọta ụlọ akwụkwọ (52)
Mmalite / Azụmahịa (79)
Nzaghachi ogo 360 (74)
Njikwa enweghị & Ọpụpụ (138)
Ngwanrọ njikwa enweghị efu efu
Ndepụta onye ntinye akwụkwọ (ATS) (144)
Ngwanrọ nyocha nke onye anamachọihe efu
Nsochi ndị bịaranụ na oge elekere (208)
Ngwanrọ nsochi oge efu
Ngwa nsochi oge maka Freelancers
Njikwa uru (76)
Nlekọta nkwụghachi ụgwọ (38)
Nkwado ndị ọrụ (10)
Mmekọrịta ndị ọrụ (122)
Nlebanya ndị ọrụ (184)
Ngwanrọ arụpụtaghị ndị ọrụ
Ọdịmma ndị ọrụ (79)
Njikwa onwe onye (11)
Ịhazi oge HR (113)
Ngwa nhazi oge efu
Ọrụ ndị mmadụ (HR) (410)
Ngwa HR maka obere azụmaahịa
Njikwa ihe onwunwe ọgụgụ isi (6)
Chart nke Org (19)
Njikwa ụgwọ ọnwa (149)
Software akwụ ụgwọ maka obere azụmaahịa
Arụmọrụ & Ntụle (140)
Ntụle arụmọrụ maka obere azụmaahịa
Mbanye na ngwa (203)
Ngwa mbanye maka obere azụmaahịa
Nnwale nbanye (59)
Ọzụzụ na ịbanye (204)
Ngwa nbanye n'efu
Mkparịta ụka vidiyo (53)
Njikwa ndị ọrụ (307)
Ngwanrọ njikwa ndị ọrụ mkpanaaka
Ngwanrọ njikwa ndị ọrụ maka ụlọ ọrụ oku
Ụlọ ọrụ Specific
Ụlọ akwụkwọ na agụmakwụkwọ (166)
Ihe owuwu (19)
Onye na-ere ụgbọ ala (7)
Nlekọta ụmụaka (16)
Nlekọta Ụka ​​(10)
Ọnwụnwa ụlọọgwụ (17)
Ihe owuwu (112)
Atụmatụ ihe owuwu (12)
Ngwanrọ na-eme atụmatụ nrụpụta
Nlekọta ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ (CREM) (28)
Nlekọta ndị inye onyinye (18)
Ihe ndekọ ahụike eletrọnịkị (58)
Ntụrụndụ na mgbasa ozi (52)
Nlekọta ugbo (4)
Ọrụ ego (184)
Ahụ ike na ahụike (70)
Ngwanrọ njikwa mgbatị ahụ
Ngwanrọ Ọzụzụ nkeonwe
Nri na ihe ọṅụṅụ (64)
Sistemụ ozi gbasara ala (GIS) (11)
Nlekọta ahụike (191)
Ngwa ngwa ọgwụgwọ
Nlekọta ụlọ nkwari akụ (79)
Ndokwa Software maka Hotels
Software mkpuchi maka ndị nnọchi anya
Nlekọta ihe ịchọ mma (7)
Ngwanrọ Njikwa Omume Iwu
Ngwanrọ iwu maka njikwa ikpe
Ngwa ngwa (141)
Nrụpụta & Injinia (94)
Ịgba ụgwọ ahụike (33)
Enweghị uru na ọrụ afọ ofufo (63)
Ngwanrọ na-enweta ego anaghị akwụ ụgwọ
Mmanụ & gas (27)
Ụlọ ọrụ ndị ọzọ (34)
Mgbochi ụmụ ahụhụ (3)
Ijikwa ihe onwunwe (96)
Ngwanrọ njikwa ihe mgbazinye
Ngalaba Ọha (17)
Ala na ụlọ (121)
Nlekọta ụlọ oriri na ọṅụṅụ (101)
Ngwanrọ njikwa ngwa ahịa maka ụlọ oriri na ọṅụṅụ
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ POS (53)
Ngwa ahịa azụmaahịa Maka obere azụmaahịa
Njikwa nchekwa (51)
Nlekọta Ụlọ Mmanya (30)
Ngwanrọ ntinye akwụkwọ nke Salon
Nhazi anyanwụ & ngwa ngwa amụma
Njem na njem nlegharị anya (93)
Ngwa mgbazinye ezumike
Ngwanrọ njikwa njem
Nlekọta ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ (6)
IT & Nchekwa
Njikwa API (67)
Ndị na-ewu ngwa (130)
Ngwa njikwa ndụ okirikiri (48)
Nyochaa arụmọrụ ngwa (APM) (99)
Azụ / Ebe nchekwa data (109)
Ịde blọgụ (25)
Ndepụta ahụhụ (38)
Pịa wayo (12)
Ndị ndezi koodu (21)
Ebe nchekwa koodu (21)
Netwọk Nnyefe Ọdịnaya (CDN) (29)
Cyber ​​& Nchekwa data (332)
Okwu nsochi software
Ngalaba na Bochum (66)
Ndị na-ewu weebụsaịtị dị mfe (138)
Ngwanrọ Nrụpụta Weebụsaịtị efu
Dọrọ ma dobe Ngwanrọ Nrụpụta Weebụsaịtị
Ngwọta eCommerce (425)
Ngwanrụ ihe nrụpụta weebụsaịtị eCommerce
Ngwa ngwa ịzụ ahịa eCommerce
Mgbanwe data eletrọnịkị (EDI) (21)
njirimara na njikwa nnweta (108)
Ịntanetị nke Ihe (IoT) (62)
Njikwa mgbanwe IT (14)
Njikwa IT (182)
Njikwa Ọrụ IT (ITSM) (78)
Imeziwanye ihe nketa (16)
Ọmụmụ igwe (120)
Ndị na-enye ọrụ jisiri ike (MSP) (63)
Ụlọ ahịa (100)
Njikwa Ngwaọrụ mkpanaaka (MDM) (29)
Nkwa emo & Nhazi (29)
Njikwa netwọk (83)
Nleba anya netwọkụ (36)
Njikwa okwuntughe (44)
Platform dị ka ọrụ (PaaS) (158)
Ụgbọ ala ịzụ ahịa (61)
Otu akara na (SSO) (25)
Chọọ saịtị & Ụdị Weebụ (54)
Njikwa ndenye aha (80)
Nlekọta sistemu (47)
Ụlọ data Virtual (6)
Akụrụngwa Desktọpụ mepere emepe (VDI) (14)
Ntụle anya (30)
Mgbasa ozi & Mgbakwunye (199)
Ngwanrọ nsochi Mgbakwunye
Njikwa ika (153)
Mgbasa ozi na ebumnuche (272)
Ngwanrọ atụmatụ ahịa ahịa
Ịre Ọdịnaya (292)
Akara dijitalụ (67)
Ịre ahịa email (331)
Ngwa ngwa akwụkwọ akụkọ email
Ngwanrọ mgbasa ozi email
Trigger & Ngwa akpaaka maka ire ahịa email
Ngwanrọ data email
Ngwa ahịa email efu
Ịre ahịa mmetụta (39)
Nchịkọta ahịa (313)
Akụrụngwa ahịa (474)
Ngwa ahịa akpaaka maka obere azụmaahịa
Ngwa ngwa ahịa akpaaka efu
PR na mgbasa ozi (63)
Ahịa ntụaka (51)
Njikwa aha (95)
Software nsochi SEO
Ngwa SEO efu
Ahịa SMS (89)
Mgbasa ozi ọha (322)
Ngwanrọ nhazi oge mgbasa ozi
Ngwanrọ nlekota mgbasa ozi ọha
Uto Mgbasa Ozi Ọhanahụrụ Software
Ngwanrọ njikwa mgbasa ozi ọha
Ndị ọzọ (98)
Agile & Ụzọ ndị ọzọ (104)
Ndepụta akụrụngwa (76)
Nlekọta ihe nrite (10)
Njikwa azụmahịa (277)
Ngwanrọ njikwa azụmaahịa obere
Njikwa Usoro Azụmahịa (BPM) (167)
Ngwanrọ nhazi usoro azụmahịa
Njikwa oru ngo okike (133)
Njikwa ike (5)
Mgbazinye akụrụngwa (19)
Akụrụngwa maka nrụpụta ụlọ ọrụ (ERP) maka nrụpụta
Njikwa mmemme (159)
Ngwanrọ njikwa mmemme maka ndị anaghị akwụ ụgwọ
Ngwanrọ njikwa mmemme efu
Njikwa akụrụngwa (61)
Njikwa Ọrụ Ubi (FSM) (179)
Ngwanrọ izipu ọrụ ubi
Ngwanrọ njikwa ọrụ ubi maka obere azụmaahịa
Ngwanrọ nhazi oge ọrụ ubi
Njikwa Akụrụngwa edobere (27)
Njikwa ụgbọ mmiri (78)
Ngwanrọ njikwa ụgbọ mmiri efu
Ọchịchị, ihe ize ndụ na nnabata (GRC) (123)
Ngwanrọ nnabata HIPAA
Njikwa otu (26)
Otu ndị nwe ụlọ (HOA) (7)
Njikwa Ndepụta Ngwaahịa (258)
Ngwanrọ njikwa ngwaahịa maka azụmaahịa
Ngwanrọ Ndepụta Ngwaahịa
Ngwanrọ njikwa ngwaahịa maka obere azụmaahịa
Njikwa oru ngo IT (95)
Njikwa ikike (13)
Ijikwa usoro (134)
Njikwa amụma (6)
Njikwa Ozi Ngwaahịa (PIM) (58)
njikwa ndụ okirikiri ngwaahịa (PLM) (24)
Njikwa ngwaahịa (92)
Ngwaahịa Roadmap Software
Akpaaka Ọrụ Ndị Ọkachamara (PSA) (69)
Njikwa oru ngo (404)
Akụrụngwa Management Project
Ngwanrọ njikwa ọrụ n'ime ụlọ
Njikwa Pọtụfoliyo Project (105)
Njikwa akụrụngwa ọrụ (120)
Usoro nhazi (162)
Usoro oru ngo (32)
Usoro Robotic Automation (RPA) (14)
Nlekọta Spa (31)
Atụmatụ atụmatụ (22)
Njikwa Chain ọkọnọ (172)
Njikwa ọrụ (272)
Nlekọta oge (162)
Njikwa Ngwá Ọrụ (22)
Ụlọ nkwakọba ihe na izipu (111)
Usoro arụ ọrụ (25)
Njikwa usoro ọrụ (150)
Usoro ọrụ (41)
Kalịnda & Akwụkwọ ndetu (29)
Ijikwa ebumnuche (31)
Ngwa nrụpụta (244)
Hazie ọnụ ahịa ọnụahịa (CPQ) (39)
Nkwekọrịta na esigning (81)
Njikwa nkwekọrịta (94)
Ịma amụma na akara ndu (42)
Mkpesa ndu (98)
Ọgbọ ndị ndu (246)
Njikwa ndu (176)
Ebe ire ere (POS) (161)
Akụrụngwa nke ire ere (POS) maka azụmaahịa
njikwa atụmatụ (41)
Nkwalite ọrịre (31)
Ndị agha na-ere ahịa (30)
Njikwa ire ahịa (296)
Ngụ maka ire ere (43)
Azụmahịa nwere ike ịchekwa oge na ego na njikwa akaụntụ na ego site na iji ngwaahịa dabara adaba na ụdị a. Enwere ngwaahịa ndị bụ isi maka ntinye akwụkwọ ntinye otu. Ma ọ bụ, ị nwere ike ịhọrọ usoro ntinye okpukpu abụọ nke na-enyere aka ịnọgide na-ere ahịa na ịzụta leta ma ọ bụ soro azụmahịa ego. Ngwaahịa ndị ka dị elu na-egosipụtakarị ikike ịme ngụkọ ụtụ, mepụta na izipu akwụkwọ ọnụahịa, wepụta akụkọ gbasara ego, usoro ịkwụ ụgwọ, na izipu ncheta ozugbo maka ịkwụ ụgwọ. Ị nwere ike ịhụ ozi ndị ọzọ gbasara ngwaahịa dị na ngalaba a na ntuziaka ngwanro ajụjụ na ego.
Nyocha & ọgụgụ isi Software Analytics & ọgụgụ isi
Ngwaahịa sọftụwia dị n'ụdị a na-enyere aka ịtụgharị data azụmaahịa siri ike ka ọ bụrụ ozi bara uru nke na-enyekarị aka n'ime mkpebi dabere na data. Ụdị ngwanrọ nyocha dị iche iche dabara maka mkpa dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, ngwanrọ nyocha ndị ahịa na-enyere aka ịchọpụta nchegbu ndị mmadụ na-enwekarị gbasara ọrụ ndị ahịa gị. Ntụle ahịa ahịa, n'aka nke ọzọ, nwere ike inyere gị aka tụnyere nsonaazụ nke mgbasa ozi ahịa gị wee chọpụta nke usoro ịzụ ahịa na-arụ ọrụ kacha mma maka azụmahịa gị. Ihe ndị a niile na-emecha nyere gị aka ime mkpebi azụmaahịa mara mma karịa. Ọ bụrụ na ịmaghị n'aka ngwaahịa ị ga-ahọrọ ma ọ bụ otu esi ahọrọ ha, tulee ịgụ akwụkwọ ntuziaka ngwanrọ na ọgụgụ isi anyị.
Mmekọrịta Software Mmekọrịta
Imirikiti azụmaahịa taa nwere ndị ọrụ mkpanaka, yabụ na-achọ sọftụwia mmekorita na-enyere ndị otu dịpụrụ adịpụ aka ịrụkọ ọrụ nke ọma enwebeghị ike. Ngwaahịa dị n'ụdị a na-akwado nzikọrịta ozi n'ezie, ịchekwa akwụkwọ na ịkekọrịta, njikwa ọrụ na njikwa usoro ọrụ. Ị ga-ahụkwa ngwaahịa ndị emebere iji kwado mmekorita oru ngo, njikwa ihe ọmụma, njikwa echiche, na ozi ngwa ngwa. Ngwá ọrụ mmekọ ihe niile na-enye ihe niile dịkwa. Ị ga-ahọrọ ngwaahịa dabere nha nke nzukọ gị yana mkpa nkwado gị. Dịka ọmụmaatụ, nnukwu ụlọ ọrụ nwere ọtụtụ narị ndị ọrụ na-arụ ọrụ site na ọtụtụ ebe nwere ike ịchọ ngwaahịa na-enyere aka ịchọta mkparịta ụka ochie n'ụzọ dị mfe karị. Ị nwere ike ịmụtakwu maka otu ngwanro a site na ntuziaka ngwanrọ mmekorita anyị.
Nkwukọrịta Software Communications
Emebere ngwaahịa dị n'ụdị a iji nyere aka mee ka nkwukọrịta dị n'etiti otu, ndị ọrụ ibe, ndị ahịa na njikwa. Ụdị sọftụwia a na-enyere aka jikọọ ọtụtụ kọmputa ma ọ bụ ngwaọrụ mkpanaaka n'ebe dị anya, na-enye ndị ọrụ ohere ịgbanwe ozi ma ọ bụ faịlụ n'ụdị dị iche iche, gụnyere ederede, ọdịyo na usoro vidiyo. N'okpuru udi a, ị ga-ahụ a dịgasị iche iche nke email software ngwọta, ngosi mmemme, VoIP ngwọta, wdg Ngwaahịa kwesịrị ekwesị maka webụ ogbako, video nkata, na esịtidem nkwukọrịta dịkwa. Ntuziaka ngwanrọ nkwukọrịta anyị na-enye nkọwa ndị ọzọ gbasara ngwaahịa dị na ngalaba a.
Ọrụ ndị ahịa & CRM Software Ọrụ Ndị ahịa & CRM
Ngwaahịa dị na ụdị a na-enyere aka ịnakọta na ịhazi data ndị ahịa ma debe ha n'otu ebe, ka ị nwee ike inwe echiche 360-ogo nke ndị ahịa gị - nke na-emecha nyere gị aka imeziwanye afọ ojuju ndị ahịa, wuo ma nọgide na-enwe mmekọrịta ogologo oge na ndị ahịa. Ngwaahịa dị iche iche na-elekwasị anya n'akụkụ dị iche iche nke ọrụ ndị ahịa yana CRM, dị ka, nkwado na desktọpụ enyemaka, njikwa nzaghachi, njikwa mpaghara ahịa, na akpaaka ike ahịa. Akụrụngwa CRM dị elu karịa nwere ike inyocha data ndị ahịa wee nyere gị aka ịghọta omume ndị ahịa. Maka ịmatakwu gbasara ụdị ngwa ngwa a, ị nwere ike ịga na ọrụ ndị ahịa anyị na ntuziaka ngwanrọ CRM.
Design & Multimedia Software Design & Multimedia
Na ndị na-ere ahịa gburugburu ụwa shiftilekwasị anya na ọdịnaya a na-ahụ anya, imewe na ngwọta mgbasa ozi dị ugbu a na-achọsi ike. Ụdị ngwanro a na-enyere gị aka ịmepụta, dezie na jikwaa onyogho, vidiyo, akara ngosi, foto ndabere na infographics. N'okpuru otu a, ị ga-ahụ ụdị ngwaahịa dị iche iche lekwasịrị anya n'akụkụ dị iche iche nke imewe na mgbasa ozi dị iche iche, dị ka, imewe eserese, imepụta akara, ndezi vidiyo, na ndezi onyonyo. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịzụta ngwaahịa sitere na ngalaba a, nhazi anyị & ntuziaka sọftụwia mgbasa ozi ga-enyere gị aka ịme mkpebi mara mma.
Agụmakwụkwọ & Ịmụ Software Education & Learning
Ọtụtụ ngwaahịa dị n'ụdị a chọrọ inyere ndị otu dị iche iche aka n'ọrụ nke ịnyefe, nsuso, mkpesa ma ọ bụ ijikwa mmemme ọzụzụ n'ịntanetị. Ị ga-ahụkwa ngwa mmụta na mmụta na-enye gị ohere ịhazi, zụlite, kenye na nyochaa usoro ọzụzụ nke gị. Ụfọdụ ngwaahịa na-enyere gị aka ịmụta nzuzo, ebe ndị ọzọ e mere iji nyere ndị mmalite aka inye ọzụzụ ndị ọrụ. Ị nwere ike nweta ohere ịnweta ụfọdụ nyiwe nkuzi n'efu. Iji mụtakwuo maka otu esi atụnyere na họrọ ngwanrọ sitere na ngalaba a, tulee ịgụ akwụkwọ ntuziaka anyị na mmụta ngwanrọ.
Akụrụngwa akụrụngwa mmadụ
Otu a gụnyere ngwaahịa ndị na-enyere aka ịmegharị ọrụ HR nke otu nzukọ, dị ka, ichekwa data ndị ọrụ, ịgba ụgwọ akwụ ụgwọ, ijikwa mmemme uru, na ime nyocha arụmọrụ. Anyị edepụtala ngwaahịa ndị dị n'okpuru ngalaba dị iche iche, yabụ ị nwere ike ilekwasị anya ngwa ngwa na ngwaahịa na mpaghara kwesịrị ekwesị. Otú ọ dị, ngwọta dị iche iche n'okpuru subcategory nwere ike inwe ụzọ dị iche iche iji dozie otu nsogbu ahụ, na njirimara nwere ike ịdị iche iche. Ya mere, ị kwesịrị iji tụnyere na họrọ amamihe. Ị nwere ike ịgụ akwụkwọ ntuziaka akụrụngwa akụrụngwa mmadụ maka nkọwa ndị ọzọ na ngalaba nke ọ bụla.
Ụlọ ọrụ Specific SoftwareIndustry Specific
N'okpuru otu a, ị ga-ahụ ihe ngwọta na-egbo mkpa nke ụlọ ọrụ niche gị. Dịka ọmụmaatụ, ngwaahịa emebere maka ụlọ ọrụ ahụike na-enyekarị aka ijikwa usoro nhazi oge. Ụfọdụ ngwaahịa na-agwa gị mgbe onye ọrịa batara ma ọ bụ lelee ya. Ị ga-ahụ ngwọta maka ụlọ ọrụ dị iche iche maka ọtụtụ ngalaba, gụnyere agụmakwụkwọ & agụmakwụkwọ, ntụrụndụ & mgbasa ozi, njem & njem nlegharị anya, na ihe owuwu. Iji nweta nlebanya nke ngalaba niile, ị nwere ike ịgụ ntuziaka sọftụwia nke ụlọ ọrụ anyị.
IT & Nchekwa SoftwareIT & Nchekwa
Ngwaahịa dị n'ụdị a na-enyere ndị azụmaahịa aka ijikwa ọrụ metụtara IT, gụnyere mmepe webụsaịtị, mmepe ngwa, nnabata, njikwa okwuntughe na njikwa ndenye aha. Ị ga-ahụ ngwọta ndị na-enyere aka melite nzikọrịta ozi, njikwa data, ire na ire ahịa. Ụfọdụ ngwaahịa ngwanrọ IT & nchekwa na-abịa na njirimara na-enyere aka ịchọpụta, gbochie, na chebe megide mwakpo ọjọọ ma ọ bụ opekata mpe, kpachie oke mmebi site na ụdị mwakpo ahụ. Ngwa dị iche iche dị, nke ọ bụla n'ime ha na-elekwasị anya n'akụkụ dị iche iche nke IT & Nchekwa. Ị nwere ike ịgụ akwụkwọ ntuziaka IT & Nchekwa anyị ka ịmatakwu gbasara nhọrọ niile dị.
Ahịa Software Marketing
Ngwaahịa ndị a na-enyere aka ịhazi na mebie mgbasa ozi ahịa ma megharịa ụfọdụ ọrụ ahịa, dị ka, ọgbọ ndu, ahịa email, njikwa mgbasa ozi ọha na eze, na njikarịcha search engine. Ngwaahịa ziri ezi na-enyere gị aka ịchọpụta na itinye aka na ndị ahịa nwere ike, tolite na jikwaa mmekọrịta gị na ha, ma nyochaa nsonaazụ nke mkpọsa ahịa gị. Ihe ndị dị mkpa ị ga-achọ gụnyere ntinye CRM, ikike inye akara, nkewa ndị ahịa, na ike ịzụlite ụzọ ma ọ bụ mee mkpọsa ozi-e ezubere iche. Iji mụtakwuo maka ụdị ngwa ahịa ahịa dị iche iche, ị nwere ike ịgụ akwụkwọ ntuziaka ngwa ahịa ahịa anyị.
Ngwanrọ dị iche iche dị iche iche
Ụdị a nwere ngwaahịa ndị na-adabaghị na ụdị ngwanrọ ọ bụla. Ọ bụrụ na ị na-achọ ngwaahịa pụrụ iche ma ọ bụ nke a na-adịghị ahụkebe, ị nwere ike ịhụ ya ebe a. Gụọ ntuziaka sọftụwia anyị dị iche iche maka ozi ndị ọzọ gbasara ngwaahịa dị na ngalaba a.
Njikwa Ngwa Ngwa njikwa arụmọrụ
Akụrụngwa njikwa arụmọrụ na-akpaghị aka ụfọdụ ọrụ azụmaahịa iji nyere aka melite otu otu nzukọ na-emepụta, na-ebuga, na ịzụ ahịa ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ya. Nke a pụtara na sọftụwia njikwa arụmọrụ ziri ezi na-enyere gị aka ịhazi ma mebie usoro azụmahịa gị nke ọma. Ngwaahịa dị iche iche dị na ụdị a na-elekwasị anya na mpaghara dị iche iche nke njikwa ọrụ, gụnyere njikwa ọrụ, njikwa ọrụ, njikwa usoro, na njikwa ihe omume. Ị ga-ahụkwa sọftụwia dabara adaba maka ụfọdụ ụlọ ọrụ. Ọ bụrụ na ịmaghị n'aka ngwaahịa ị ga-ahọrọ, tụlee ịgụ akwụkwọ ntuziaka ngwanrọ njikwa ọrụ anyị.
Ngwanrọ nkeonwe nkeonwe
Ụdị ngwanrọ a na-achọ inyere ndị mmadụ aka ịrụ ọrụ nke ọma karị. Dịka ọmụmaatụ, ụfọdụ ihe ngwọta nwere ike inyere gị aka ịtọ ihe mgbaru ọsọ, soro oge ewepụtara iji rụchaa ọrụ, nyochaa ọganihu, ma ọ bụ chọpụta otú i si etinye oge na kọmputa. Ị ga-ahụkwa ngwanrọ na-enyere aka melite nrụpụta. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-ede akwụkwọ, ị nwere ike ịchọ ngwọta nke na-egosipụta njehie na-akpaghị aka ma ọ bụ nye aro okwu. Ka ịmatakwu gbasara ngwaahịa dị na ngalaba a, ị nwere ike ịgụ akwụkwọ ntuziaka ngwanrọ nkeonwe anyị.
Ahịa Software ire ere
Emebere ngwaahịa dị n'ụdị a iji nyere ndị otu dị iche iche aka iru ebumnuche ahịa ha mgbe niile. Akụrụngwa ire ere na-enyekarị aka n'ọrụ nke ịzụlite ndị na-ere ahịa, ijikwa ọrụ ahịa, ịhazi na ime atụmatụ ahịa. Ndị na-ahụ maka ire ere na-eji ngwaahịa ndị a nweta nghọta n'ime ihe ngosi arụmọrụ bụ isi wee tọọ ebumnuche ahịa ya. Ị ga-ahụ ngwọta sọftụwia ahịa lekwasịrị anya n'ọgbọ ndu, njikwa ndu, na ịkọ amụma ahịa. Ị ga-ahọrọ ngwaahịa dabere nha ndị otu ahịa gị, ebumnuche ahịa ụlọ ọrụ gị na mpaghara elekwasị anya. Ịgụ akwụkwọ ntuziaka ngwa ahịa anyị ga-enyere gị aka ịhọrọ ngwaahịa ziri ezi maka ụlọ ọrụ gị.
Ejubigara ókè? Hapụ oge ọzọ
Na-arụ ọrụ na netwọk kasị ukwuu nke ndị ọkachamara nọọrọ onwe ha ma mee ihe, site na ntụgharị ngwa ngwa gaa na nnukwu mgbanwe.
Mmepe & IT • Nhazi & okike • Ahịa & Ahịa • Ederede & Ntụgharị • Onye nchịkwa & Nkwado Ndị Ahịa • Ego & Akaụntụ
Ndị ahịa kwadoro 4.9/5
Chọpụta ụlọ ọrụ ahụ
Ọnụ ahịa na-amalite na $5.00 / h
Ndị otu anyị na-anwale ọtụtụ narị sọftụwia, ọrụ na atụmatụ azụmaahịa kwa afọ site na ndị ndụmọdụ nke anyị yana otu ndị isi azụmaahịa.
Anyị na-ahọrọ ngwọta siri ike naanị site na oke ọnụ ahịa uru kachasị elu bụ ndị dị mfe iji, ndị na-ejikọta nke ọma na ụdị ọ bụla nke na-agụnye atụmatụ ndị na-eduga iji hụ na ị ga-anọ n'elu mpaghara azụmahịa gị.
Software ga-enwerịrị na 2022
A na-ahọrọ ngwaahịa niile ma nyochaa onwe ya. Ọ bụrụ na ịzụrụ site na njikọ njikọ, a ga-enyerịrị onye na-ahụ maka ndị na-ekpe ikpe, nke na-enyere aka ịkwado ọrụ ya.
© 2022 smartMILE & Co. Ikike niile echekwabara. amụma nzuzo.
® smartMILE & Co. bụ ụghalaahịa edenyere n'akwụkwọ.